Sacdiyo shariif oo boqolal dad soomaali ah dhacday? halista heshiisyada internetka iyo dhaqamada scamerska soomaalida ah? – Kiribto Somali Media
Wariye daahir calasow ayaa baaritaano iyo soo bandhigitaan ku haya kiiska haweeyneydan sheegatay in ay dooneysay in ay dhisto shirkad wayn, oo si calaami ah usoo saarta basbaas, leh dhadhanka basbaas soomaaliga oo kale, isla markaane dunida loo suuq geeyo.
boqolal soomaali ah ayaana howshan ku farxay si wayne u maal gashtay, in kastoo sacdiyo sauce shirkadeeda loogu magacday balse qaabka maalgashi ayaana intiisa badal ku dhacay qaab online ah, intaba badan soomaalida dunida ku kala nool ayana qaabkas u maalgashtay halka dadka rer amerikane qarkood sidaa oo kale umaalgashteen.
Inkabadan 5 sano ayaa maalgashtayaasha qaarkood aysan ka war hayn xaalka, iyo halka ay mareyso shirkadii ay maalgashteen, hadii qaba email ah ay ula xirirane, waxay la kulmaan oo qura, howl ayaa socota ama jawaab la aan ku aadan hantidooda iyo xaalkeeda.
Baaritaanka uu sameeyay wariye daahir calasow oo qeybo badan leh, ayana waxan ka dhax heli kareynaa jawaabo aad ufara badan iyo farsamooyinka tuugada soomaalida ah u dhacaaan dadka soomaaliyeed een dabinada onlinka iyo mala’awaalada ku dhisan la socon iyo sida ay u shaqeeynba.
halkan ka daawo muqaalkan oo uu duubay wariye dahir calasow
Sacdiyo shariif oo boqolal dad soomaali ah dhacday?halista heshiisyada internetka scamerskasomalida?